I-1. Yini i-Nootropics ne-Sunifiram?
I-2. I-Sunifiram isebenza kanjani?
I-3. Izinzuzo ezinhlanu ezikhona ze-Sunifiram
I-4. Indlela yokusebenzisa i-Sunifiram
I-5. I-Sunifiram Stack
I-6. Yimiphi imiphumela emibi ye-Sunifiram
I-7. Ubani ongasebenzisa i-Sunifiram
Yini i-Nootropics ne-Sunifiram?
Uke wacabanga mayelana nokukhipha amandla amakhulu ngokumemori, ukugxila, nokungena? Ngezinye izikhathi ungase ufune ukuhlola ukuhlolwa kwakho kodwa uzizwe sengathi unomatasa kakhulu ukuze ungashisi amafutha angaphakathi kwamabili. Into enhle ukuthi, manje ungakwazi ukuthuthukisa kalula ikhono lakho lokuqonda ngesikhathi esifushane. Njengoba kufika ubuchwepheshe, ungazi kabanzi mayelana nemikhiqizo eyokubeka kuqala.
Uma uzizwa sengathi ufuna ukuthuthukiswa endleleni ubuchopho bakho busebenza ngayo, kufanele uzame ukusebenzisa ama-nootropics. I-nootropic ivela egameni elithi "NOUS" nelithi "TROPOS" elisho ubuchopho, lushintshiwe noma lushintshiwe, ngokulandelana. Zaziwa kangcono njengezidakamizwa ezihlakaniphile ezithuthukisa imisebenzi yomuntu yokucabanga. Sekuyiminyaka, izaziso ze-nootropics zaziwa ngokwandisa ubukhali futhi zithonya amandla engqondo ngokuphawulekayo.
Ama-nootropics angeneka, ikakhulukazi uma ulenga ebhalansi futhi udinga okuthile okwenza uphume. Abanabhizinisi, abafundi, ngisho nabaqaphi baye basebenzisa ama-nootropics njalo ukuze bathole umkhawulo wabo. Ngaphandle kwalokho, i-nootropics ibikwa ukuthi iyasiza kuziguli ezinenkinga yokusebenza kwezimoto ezifana neHuntington's, i-Parkinson, i-ADHD ne-Alzheimer's disease.
Enye yama-nootropics enikeza imiphumela emihle kakhulu I-Sunifiram, okuyinto eyaziwa nangokuthi i-DM-235. Isakhiwo saso sifana ne-racetam nootropics kodwa sinamandla izikhathi eziyinkulungwane kune-piracetam. Ukuphila kwengxenye ka-Sunifiram kungamanye amahora amabili.
Le nootropic yenziwa kuqala ngonyaka ka-2000 ngabososayensi base-University of Firenze e-Italy. Akuzange kucatshangwe ngokucophelela, kodwa izifundo zesilwane esandulele ezenziwe kuso zibonisa ukuthi i-nootropic esebenza kahle kakhulu futhi engadlala indima ebalulekile ekuphathweni kwezifo ze-neurological.
I-Sunifiram isebenza kanjani?
Nakuba I-Sunifiram kubhekwe njengelungu lokukhiphela i-piracetam, isakhiwo salo lihluke uma kuqhathaniswa nemikhakha. Ihlelwe esigabeni samakhemikhali esifanayo njenge-alkaloid ye-piperazine.
Nakuba indlela yayo yesenzo engaziqondi ngokugcwele, kuyaziwa ukuthi isebenza ngokugqugquzela umsebenzi we-glutamate receptors. Futhi kwandisa ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-acetylcholine, okuyi-neurotransmitter yokufunda.
Inqubo eyinhloko yesenzo se-Sunifiram ikholelwa ukuthi yi-ampakine. Lokho kusho ukuthi uma usuwela umkhawulo wegazi-ubuchopho, bese ubopha nge-AMPA-type glutamate receptors etholakala ebuchosheni. Ngenxa yalokho, kukhona ukugqugquzelwa kokukhiqizwa kwe-glutamate, okuyinto ye-neurotransmitter ebalulekile futhi inendima yayo yokusebenza kwe-neural.
I-Glutamate i-neurotransmitter ye-excitatory inendima yakhe yokukhuthaza ukukhululwa kwe-plasticaplasticity. Lokhu kusho ukuthi kuthuthukisa ikhono le-synapses lekhono lokuphendula ukwanda noma ukwehla emsebenzini.
Umzimba udinga amazinga adingekayo we-glutamate ukuze kube khona amandla okuhlala isikhathi eside noma kunalokho ukuthuthukiswa okuhlala njalo emandleni wesignali phakathi kwe-neurons.
Futhi, amazinga e-glutamate ayadingeka ku-hippocampus, obambe iqhaza ebuchosheni ukuvumela ukuhamba kwendawo. Inikeza futhi ukwakheka nokugcinwa kwememori. Kukholelwa ukuthi ikhono lika-Sunifiram lokukhulisa umsebenzi wokuzizwa kuyisimo sokuthuthukisa amandla esignali ye-neural ku-hippocampus.
Ngaphandle kokuthuthukisa ukubunjwa kwememori nokukhunjulwa, ama-ampakines anikeza ukuvuselela okuncane okusiza ukwandisa ukuphazamiseka namandla. Ngenhlanhla, akubangeli ukuphumula, neminye imiphumela emibi eyenziwa ngokusetshenziswa kwezikhuthazo ezifana ne-amphetamines, i-methylphenidate (i-Ritalin), ne-caffeine.
Ukwengeza, i-Sunifiram yenza njenge-cholinergic ngokukhulisa ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-acetylcholine. I-Acetylcholine ithinta izici eziningi zokucubungula, kufaka phakathi isivinini sokufunda kanye nekhono, inkumbulo, namandla okuxazulula izinkinga ezihlukile ngaphandle kokuthembela ekuziphatheni okufundiwe.
Nakuba kungakaziwa ukuthi i-Sunifiram ilawula kanjani ukukhiqizwa kwe-acetylcholine, isifundo sezilwane sase-Italy senze lokho kwabonisa ukuthi iDM235 yaba nomphumela ofanayo we-piracetam.
I-Sunifiram vs. Adderall
I-Sunifiram ne-Adderall inqubo yesenzo ihluke kakhulu kusukela i-Adderall isebenza ngokukhuthaza ukukhululwa kwe-norepinephrine ne-dopamine, okwenza ngcono ukugxila komuntu futhi iholele ekuthuthukiseni ngokomzimba nangokwengqondo.
I-Sunifiram, ngakolunye uhlangothi, isebenza nge-receptors ye-glutamate ngakho yandisa ukubunjwa kwememori.
Izinzuzo ezinhlanu ezikhona ze-Sunifiram
Wonke umuntu ufanelwe ukuba nokuphila kocansi okwanelisayo. Nakuba ubulili obujabulisayo kungenye yezinto okufanele umuntu azijabulele impilo yakhe yonke, kungase kungabi yilowo nalowo.
Abanye abantu bangaba nesimo sonke isikhathi ngenkathi abanye bengashintsha isikhathi ngezikhathi. A low sex drive drive kungenza uhlupheke ngokomzwelo futhi kuthinte ubuhlobo bakho futhi. Ngenhlanhla, kungakhathaliseki ukuthi ucansi lwakho lube luphansi kangakanani, kukhona usizo.
Enye yezindlela ezilula ongenza uzifunele ukuzijabulisa nomlingani wakho ukuthi uthathe i-Sunifiram. Lokhu kungenxa yokuthi yenza ukukhohlisa ekwenzeni uzizwe sengathi awukwazi ukumelana nomlingani wakho. Ucwaningo olwenziwe kokubili amadoda nabesifazane lubonise ukuthi enye ye-Sunifiram inzuzo yukuthi inikeza umphumela owodwa we-aphrodisiac uma uyithatha.
Nakuba kungakabonakali ukuthi kubangelwa kanjani ukwanda kwe-libido, imibono ethile ibonisa ukuthi iholela ekwandeni kokugeleza kwegazi emgodini nasesiswini.
Futhi, I-Sunifiram powder kungathuthukisa ikhwalithi yokuphila kocansi komuntu ngokwenza kube nzima ukuthinta, ukukhulisa amandla nokukhuthaza ukukhululwa kwe-dopamine kanye ne-serotonin (amakhemikhali azizwa kahle) ebuchosheni.
Namuhla, amehlo ethu cishe ayobhekana nezinkinga ezibukwayo ngenxa yokukhathala. Ukuqala izinamba ezincane nezithombe ezinkampanini ezincane, amathelevoni, kanye namathelevishini nakho kungafaka isandla kulo. Okubi nakakhulu ezinye zezokwelapha zingase zingabi lula kakhulu kithi, ikakhulukazi uma manje uphoqeleka ukugqoka izibuko.
Umbono omuhle ubalulekile ngoba uhamba phambili ekuthuthukiseni ukusebenza komuntu. Uma umbono wakho usezingeni eliphezulu, cishe uzobona izinguquko bese usabela kuzo ngokushesha. Ucabanga ukuthi ungayithuthukisa kanjani umbono wakho ngaphandle kokugqoka izibuko ezingase zithinte umthelela futhi zenze umonakalo omkhulu weso?
I-Sunifiram ibike ukuthi inike abasebenzisi bayo umbono obonakalayo owenza ukukhanya nokukhanya kube khona nakakhulu. Futhi kwenza imibala ibonakale ngokudumala.
Kwabanye, i-Sunifiram powder (314728-85-3) kubikwa ukuthi wenze umculo uhlanganyele ngokwengqondo futhi unikeze ukwaneliseka ngokomzwelo.
Kuyisimo sengqondo nesimo esinamandla
Uke uzithola usesenhla, esonakele, e-blue, noma engakhiwa? Uke wazizwa sengathi amandla aphansi amazinga akudonsa phansi futhi ngisho nendebe yekhofi noma isiphuzo sezandla kubonakala sengathi ikunika ukuphakamisa? Uma uhamba ngalokhu, ungase uzame umphumela we-Sunifiram ukugcina ubuvila buba khona.
Abahlanganyeli abasebenzisa i-Sunifiram babike ukuthi bangeze emandleni abo futhi banikeze umbono omuhle. Ukuze kube khona amandla, ubuchopho busebenzisa i-glucose ngokuvamile ehlinzekwa ngamaseli abomvu egazi. Esinye sezidakamizwa ezivimbela ukugeleza kwe-glucose kuwo wonke amakhemikhali weselula yi-Pentobarbital. Isilinganiso esincane se-Sunifiram sibonise umphumela ofanayo.
Ngezinga eliphakeme, livimbela i-glucose ukuthi ingashiyi amaseli abomvu egazi. Ngakho-ke, kuyasiza ekugxileni okuphansi ngoba kukhuthaza ukutholakala kwe-glucose.
Ithuthukisa ukugxila, ukugqugquzela nokucaca kwengqondo
Siphila ezweni elivalwe izinto eziningi kakhulu. Ngezinye izikhathi bangase basisindo futhi basikhuleke. I-monotony yokuthi kufanele ivuke nsuku zonke, ngesikhatsi esifanayo se-damn futhi senze into efanayo ingasidula. Nakuba ukugqugquzela okuqinile nokugxila kuyadingeka kuyo yonke imisebenzi umuntu angayenza, ukufinyeleleka kungase kungabi lula kakhulu.
Izeluleko eziningi ukuthi ungayithuthukisa kanjani ukugxila kwakho futhi ukuhlushwa kuye kwanikezwa kuwebhu. Ngenkathi ungase ungaqiniseki ukuthi yiyiphi phakathi kwabo enikeza, ungase ufune ukwazi ngomphumela we-Sunifiram okufanayo.
Enye yezinzuzo ze-Sunifiram ukuthi ikhulisa kakhulu ukugxila, ukugxila, nokucaca kwengqondo. Kubuye kusize ukuthuthukisa isisusa esibalulekile ekuphatheni okuphumelelayo nasekufezeni imisebenzi yengqondo.
Lokhu kungenxa yokuthi i-Sunifiram ikhulisa ukukhiqizwa kwe-neurotransmitter acetylcholine, inendima yayo ukukhuthaza ikhono lokuqonda.
Ithuthukisa ukufunda nokukhumbula
Nakuba abaningi bakholelwa ukuthi awukwazi ukufundisa izinja ezintsha endala, lokhu kungase kungabi njalo uma kuziwa ebuchosheni bakho. Kungakhathaliseki ukuthi ubudala bakho, ubuchopho bakho buyakwazi ukuzivumelanisa nokushintsha uma kuziwa ememori kanye nekhono lokufunda. Nge-supplement efanele, ungathuthukisa ikhono lokufunda izinto ezintsha nokuthuthukisa imemori yakho.
Ucwaningo lwezilwane lwenziwe ukuthi i-Sunifiram ithuthukisa ijubane lokufunda lomuntu nokugcinwa kolwazi naye. Ngaphandle kokuthuthukiswa kokusebenza emisebenzini yokufunda, kuphumelele ukuguqula amnesia okwenziwa ngamakhemikhali. Ucwaningo olwenziwe kumuntu omdala onempilo lubonise ukuthi ngisho nangokwenyuka okuncane, kusasebenza ekuthuthukiseni imemori nokufunda.
Omunye umsebenzisi we-Sunifiram wayenezinyathelo eziyishumi nanhlanu emva kokusebenzisa i-Sunifiram isilinganiso se-25mg izikhathi ezine ngesonto ngezinyanga ezine.
Kunganciphisa ubuhlungu bokuzwela
Umphumela we-analgesic wokuthi i-Sunifiram ibangela ukusiza ukuthi usebenze njenge ukuhlenga ubuhlungu futhi ubuhle obuza nalo ukuthi awuveli nokucindezeleka kanye nomphumela wecala lokukhathazeka ukuthi ezinye izinhlungu ziyanciphisa imbangela.
Ucwaningo olwenziwe ngamagundane lwabonisa ukuthi i-Sunifiram supplementation yabambezela ukusabela kwabo ekushiseni, okubonisa ukuthi le notropic inezinhlungu zokunciphisa izakhiwo. Lo mphumela ubonwe ukuthi uphezulu kwi-Sunifiram isilinganiso (0.01 mg / kg) kuyoba nesilinganiso esiphezulu, noma esincane esisebenza kahle.
I-Sunifiram ingenye ye-nootropics enamandla kakhulu emakethe namuhla futhi kufanele, ngakho-ke, kufanele ithathwe ngokuqapha okuningi. Njengoba ingakafundiwe ngokuphelele, kunzima ukufika ngesilinganiso esifanele. Nokho, umuntu kufanele agcine umthamo ophansi, ikakhulukazi uma usebenzisa okokuqala.
Ngokuyinhloko kuvela kwifomu ye-powder, futhi isisindo esivezwayo sokuqala i-Sunifiram isilinganiso ngokuvamile ngu-3mg kuya ku-4mg ethathwe kathathu ngosuku.
Ngokuvamile, kunezindlela ezimbili ezahlukene ongazithatha ngalo i-Sunifiram powder; ungakhetha ukuyixuba ngamanzi noma uyithathe ngokulinganisa. Uma ubeka ngaphansi kolimi lwakho, uzobona ukuzwa okuncane noma ukucabangela okufana nomuntu ozwayo uma ubeka umoya oqinile wokuphefumula ngaphansi kolimi lwakho.
Izinga ezilinganiselwe ziye zafakazelwa ukuthi zisebenze masinyane futhi ziqinile. Uyazi ukuthi lokhu kwengezwa sekuphumelele uma uqala ukuzwa umphumela oshukumisayo ofana no-Adderall.
Uma usuvele ungumsebenzisi we-Sunifiram onolwazi, ungandisa umthamo ku-5mg noma i-8mg kancane kancane. Lona ngumthamo olinganiselwe umsebenzisi onokuhlangenwe nakho okufanele athathe. Ngaphambi kokwandisa umthamo wakho, qiniseka ukuthi uthathe i-nootropic isikhathi esingaphezulu kweviki kumasethini aphansi.
Akufanele udlule i-10mg ngosuku ngoba imiphumela yesikhathi eside ye-Sunifiram isacwaningwa. Ukuthatha isikhathi eside kakhulu kungakha ukubekezelelana; ngakho-ke, into engcono kakhulu okumele uyenze ukuqhuba imijikelezo ye-Sunifiram ilandela ukuphumula.
I-Sunifiram ipaki iyinhlanganisela ye-Sunifiram kanye nesinye sezaziso eziningi ze-nootropic okufanele zithathwe ndawonye noma ngokulandelana ukuze zithole izinzuzo eziningi ezingqondweni. Ukuthatha i-Sunifiram yedwa kuhlinzeka ngezinzuzo ezimele kodwa ukuyibeka enye i-nootropic kusho ukuthi izinzuzo zitholwa. Kodwa-ke, kufanele uqaphele umthamo we-Sunifiram unquma ukuthatha inhlanganisela namanye ama-nootropics uze wazi ukuthi ukuphendula kwakho kubani kubo.
Nakhu ama-nootropic ahlukahlukene abeka kahle nge-Sunifiram ukuxazulula izinkinga ezimbi zemizwelo.
L-theanine- Isebenza ngokukhuthaza ukukhiqizwa kwe-GABA, i-serotonin, ne-dopamine. Ibuye ivimbele kabusha i-glutamine reuptake.
I-Sulbutiamine- Iyakwazi ukuhambisa i-glutamatergic, i-dopaminergic ne-cholinergic transmission.
Ungakhohlwa ukufaka umthombo omuhle we-choline ozokwenza njengomuntu onamandla futhi akuvimbele kusuka ebuhlungu bekhanda neminye imiphumela emibi.
Le stack ye-Sunifiram ingenye yezinhlobo ezijwayelekile kakhulu zokugqoka. Ukuze uthole imiphumela enempilo engqondweni, i-Sunifiram ivame ukufakwa nge-nootropic eyodwa noma ngaphezulu emndenini we-racetam njenge- I-Noopept, I-Oxiracetam, ne-Piracetam. Njengoba izinhlanga ziyaziwa ukunciphisa izinga lokuchofoza ebuchosheni, umthombo omuhle we-choline ufana I-Alpha GPC, i-centrophenoxine noma i-CDP choline Kunconywa.
Yimiphi imiphumela emibi ye-Sunifiram
Ngabantu bonke abafuna izindlela abangayithuthukisa ukusebenza kwabo kanye nenhlalakahle yabo yonke, abaningi baye bawela ezingezansi ezenze imiphumela emibi empilweni yabo. Ezinye zingabangela izinkinga zezempilo, kanti ezinye zingasebenzi ngokuphelele umzimba. I-nootropic engcono kakhulu ezokuvumela ukuba ujabulele izinzuzo ngaphandle kokushiya ungenasici i-Sunifiram.
Kuze kube manje, akukho miphumela emibi kakhulu eyenziwa yi-Sunifiram, kodwa kuhle ukukhumbula ukuthi ukuhlolwa kwabantu nokuhlolwa kwemithi akukakenziwa. Ucwaningo olwenziwe ezilwaneni lubonisa ukuthi le nootropic iphephile futhi ibekezeleleke kahle. Liphinde ikhombisa ukuthi ngisho nasesimweni esiphezulu kunaleso esinqunyiwe, akusho ukuthi ubungozi bokudakwa.
Yonke imiphumela emibi ye-Sunifiram eye yabika ingamancane futhi ihamba cishe ngokushesha. Zihlanganisa ukukhuphuka kokushisa komzimba komuntu, ukwanda okunamandla, nokujula. Kungabangela nokukhanda ikhanda, kwandisa ukuzwela ekulaleleni okulalelwayo nokubukwayo, ukuzwakalisa ubuhlungu, nokulala.
Lezi zithinta imiphumela ye-Sunifiram yabizwa ukuthi iyanda uma umuntu ethatha isilinganiso esiphezulu se-Sunifiram noma esihlanganisa nayo nezinye izithako. Uma uthatha isilinganiso esinconywayo, cishe ngeke uhlupheke kunoma yimiphi imiphumela emibi ekhonjiwe. Noma nini uma uzizwa sengathi ubuhlungu bekhanda buhamba, buya ku-Alpha GPC.
Ubani ongasebenzisa i-Sunifiram
Abafundi abadinga ukufunda nokugcina ulwazi oluningi.
Abantu abahlala befunda izinhlelo ezintsha, okungukuthi, abahleli bekhompiyutha nalabo abafuna ukuhlale bezazi ngezindlela ezikhulayo ezifana nabaqambi bewebhu
Abanjiniyela kanye nezochwepheshe abanomsebenzi wabo badinga ukuba kube yinto yokudala kanye ne-solver inkinga yokushesha
Abantu abahlale befuna ukufunda okuningi ukuze bahlale bekhono futhi banamakhono
Njengoba kuboniswe kulesi sihloko, i-Sunifiram yilona uhlobo lwe-nootropic oluzohlangabezana nezidingo zomzimba wakho nxazonke. Uma kuziwa ekuphepheni, unayo ngemithwalo; emva kwakho konke, akuveli okuqhamuka uma udla imishanguzo lokho kuzokukwenza ubone udokotela ngemva kokuyithatha. Into kuphela okumele ukwenze ukukhetha i-nootropic efanele ukuhlanganisa nayo futhi usebenzise inani elifanele ngesikhathi esifanele. Yenza i-oda lakho namuhla futhi ufeze imigomo yakho engokwenyama nangokwengqondo.
I-Phosphotransferases-Inqubekelaphambili Ekucwaningweni naseKwenzeni: Umshicileli we-2013, ikhasi 16-30
Ama-Ampakines: Ampakine, i-Cx717, i-Idra-21, i-Ly-503,430, i-Aniracetam, i-Pepa, i-Farampator, i-Cx-516, i-Unifiram, i-Sunifiram, i-General Books, ikhasi 1-36
I-Roving Mind: Inqubo Yanamuhla Yokuthuthukiswa Ngokweqile, ngu-Anthony Simola.